Maqal: Qaban Qaabada Banaan baxa lagu taageerayo Maamulka Jubaland oo Kismaayo ka socota – SBC
Maqal: Qaban Qaabada Banaan baxa lagu taageerayo Maamulka Jubaland oo Kismaayo ka socota
Magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada hoose ayaa waxaa lagu wadaa in saacadaha soo socda siiba maalinta berito ah ee nagu soo foolleh lagu wadaa in uu ka dhaco banaan bax siweyn la isugu soobaxay kaas oo lagu taageerayo maamulka Cusub ee Madaxweyne Axmed Madoobe.
Qaban qaabadiisa Banaan baxan ayaa ka soconaya guud ahaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Kismaayo taas oo ay wadaan dadweynaha iyo mushtamaca kale ee taageerada u haya dowlad goboleedka Cusub ee uu hormuudka u yahay madaxweyne Madoobe.
Xaafadaha 5ta ah ee ay ka kooban tahay magaalada Kismaayo ayaa siweyn loogaga dareemayaa maanta oo Axad ah u diyaar garowga banaan baxa ka qabsoomi doona magaalada, waxaana xiran goobihii ganacsi iyo isku socodkii gaadiidka iyo dadweynaha.
Madaxweynaha Maamulka Jubaland oo gudaha magaalada Kismaayo saxaafada kula hadlay ayaa iclaamiyay banaan baxan iyo in ay cabiraan raiyigooda iyo rabitaankooda shacabka Kismaayo Maamulka Jubaland.
Dhageyso Warbixin Dhameystiran oo uu Kismaayo noogaga soo diray Wariye Siciid C/daahir Joogsade. RIIX AMA DAAR
Marka laga yimaado u muujinta taageero buuxda maamulka Jubaland, waxay shacabku sidoo kale kaga codan doonaan dowlada federaalka Soomaaliya in ay faragelinta aan habooneen ee ay Jubaland ku heyso ka deyso,
Siciid Cabdi Daahir